မောင်ချစ်: ရိုးရိုးကြီး ဇေယျဟူသော အမည်ဖြင့် မီဂါစတား ဇာတ်ဆောင် ဖြစ်ခဲ့သူ 3
ရိုးရိုးကြီး ဇေယျဟူသော အမည်ဖြင့် မီဂါစတား ဇာတ်ဆောင် ဖြစ်ခဲ့သူ 3
ကိုဇေယျ ရုပ်ရည်၊ သရုပ်ဆောင်မှုနှင့် ကိုက်ညီလှသော အကွက်ကောင်း သရုပ် ဆောင်မှုများ ပါ၍ ကိုဇေယျ သရုပ်ဆောင်ပုံများ မိမိရရ ရှိခဲ့သည်။ သူ၏ တည်ကြည်စွာ သရုပ်ဆောင် တတ်သော၊ သရုပ်ဆောင်မှု ပေါ်လွင် စေခဲ့သော သစ်တော အရာရှိ ဇာတ်ကောင်ရုပ်ကို ပုံဖော်သွားသည်။ ဖခင် က ချောချောလှလှ ခေတ်ဆန်ဆန် မိမိထက် အသက် ငယ်ရွယ်သူ အလှမယ် လေးမြင့် (မြင့်မြင့်ဌေး) ကို ယူထားခဲ့ ပြီးချိန်၌ မိဘဟူသော ပညတ်ဖြင့် ဘာမျှ ပြန်မပြောဘဲ မိဘ၏ စိတ်ဒုက္ခ ရောက်ပုံကို မပြုလုပ်ရသော မြန်မာ့ဓလေ့ ထုံးတမ်းအရ အမှား ပြုမူနေသည်ကိုပင် ဖခင် စိတ်မချမ်းသာမည် စိုး၍ စောဒက မတက်ဘဲ မိမိသာလျှင် စိတ်ဆင်းရဲစွာ ကျိတ်မှိတ်ပြီး နေခဲ့ပုံ၊ သူတစ်ပါးအား ညှာတာ တတ်ပုံတို့က အစ သရုပ်ဆောင်မှု ဟူသမျှ အသက် ၀င်လှသည်။ သူ၏ ရင့်ကျက် တည်ငြိမ် သော သရုပ်ဆောင်မှုဖြင့် သူ့ရုပ်ရည်နှင့် သူပါဝင် ရသော အခန်းများမှာ အထူး ကိုက်ညီလှသည် ဟူ၍ ဖြစ်၏။
(လှလေခက်လေ) သည် ၃-၈-၅၅တွင် သွင်ရုံ၌ ပြသွားရာ စူပါ့စူပါ ၀င်ငွေ ၂၇၀၁၂၀ ကျပ် ရခဲ့၏။ မောင်မောင်စိုး ရုပ်ရှင်မှ ဒါရိုက်တာ ဦးမောင်မောင်စိုး၊ ဦးချင်းစိန်၊ ဦးမောင်မောင်၊ ဦးသာဂေါင်တို့က ဇေယျ၊ မေရှင်၊ဘသစ်၊ ဦးသာဂေါင်တို့ (မေ့တွက်တာ)၂၈-၁၀-၅၅ တွင် ရွှေဂုန်နှင့် မြို့မရုံတို့မှာ ပြရာ စူပါ့စူပါ ၀င်ငွေ ၂၅၈၉၈၃ ကျပ် ရသည်။ ရွှေဝယ်သီရိ ရုပ်ရှင်မှ ဒါရိုက်တာ ဦးမြမောင်က (ဖိုးပြုံးချို) အား ဇေယျ၊ ဖိုးပါကြီး၊ တင်တင်မူ၊ ၀င်းမာ၊ ဦးဘချစ်၊ ဒေါ်ဂျမ်းစိန်၊ ဒေါ်မြလေးတို့နှင့် ရိုက်ကူးကာ ၂-၁၂-၅၅ တွင် ဆုထူးပန်နှင့် သွင်ရုံမှာ ပြရာ စူပါ့ စူပါဝင်ငွေ ၂၆၂၂၈၄ ကျပ် ရရှိခဲ့ပေသည်။
၁၉၅၆ သည် ရိုးရိုးကြီး ဇေယျ၏ အနုပညာ စန်းအား အကောင်းဆုံး ဖြစ်ရာ သူပါဝင်ခဲ့သော ဇာတ်ကားများ အဆက်မပြတ် ရုံတင် ပြသခဲ့ရာ ပရိသတ်၏ အားပေးမှု အရဆုံးနှစ် ဆိုရပေမည်။ ယင်းနှစ်မှာပင် သူသည် (ဘ၀သံသရာ) ဇာတ်ကားမှ ဒေါက်တာထင်ပေါ် အဖြစ် သရုပ် ဆောင်ခဲ့သော ဇာတ်ကောင်ရုပ် အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့ပေသည်။ လန်ဒန် အတ်ဖလင်မှ ဒါရိုက်တာ ဦးချင်းစိန်က ဇေယျ၊ မေရီမြင့်၊ ဖိုးပါကြီး၊ ကြယ်နီ၊ ဖိုးပါလေး၊ မစိန်ခင်၊ မြင့်ဖေ၊ ပါနောက်တို့နှင့် လူတိုင်းသိပြီး ဖြစ်သော မြန်မာ့ ဂန္တ၀င် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်သော (ဥမ္မာဒန္တီ) ကို ရိုက်ကူးပြီး ၂၂-၁-၅၆ တွင် ရွှေဂုန်နှင့် မြို့မရုံတို့မှာ တင်ဆက်ရာ ပရိသတ် အကြိုက် တွေ့ခဲ့၏။ ယင်းဇာတ်ကားနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုစဉ်က သတင်းစာ ဆရာနှင့် ရုပ်ရှင် ဝေဖန် သူတို့က အောက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
မဟာဝင်ကို မူတည်၍ ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးထားသည့် အတိုင်း တန်ဖိုးရှိလှသော ဇာတ်ကားဖြစ်ကြောင်း၊ မိန်းမအတွက် အရူးအမူး ဖြစ်နေသော ဘုရင် အား ကူညီ ကယ်တင်လိုသော ညီတော် စစ်သူကြီးက မိမိ၏ ဇနီးကလေးကို ဆက်သပုံနှင့် ဘုရင်ကလည်း ညီတော်၏ ဇနီးကို လက်ခံရန် မသင့်လျော်၍ ငြင်းယ် လိုက်ပုံမှာ ယောက်ျားရော၊ မိန်းမများ အဖို့ပါ ကောင်းသော သင်ခန်းစာ ရရှိ စေနိုင်သည်ဟု ထင်မြင် ယူဆကြောင်း ဥမ္မတကော ဘုရင် အဖြစ်ဖြင့် လူရွှင်တော် ဖိုးပါကြီးက သယ်ယူသွားပုံ၊ မိန်းမချော တစ်ယောက် အနေနှင့် မေရီမြင့်က တင်ဆက်သွားပုံ၊ သမာဓိ တည်ကြည်သော စစ်သူကြီး အဖြစ်နှင့် ဇေယျက သရုပ်ဆောင် သွားပုံတို့ကို ဇာတ်ကား အစမှ အဆုံးတိုင်အောင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ရပေလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း။
. . . ဥမ္မာဒန္တီသည် အိမ်ဦးနတ် သဖွယ် ဖြစ်သော ခင်ပွန်းသည်၏ မှာကြား ဆုံးမချက်ကို မနာယူဘဲ လှဂုဏ်မောက်သည့် မာန်ဖြင့် သိဝိရာဇ် ဘုရင်ကို ထင်ရှားစွာ အလှ ပြခြင်းကြောင့် ဒုက္ခ ရောက်ပုံအပိုင်း၊ သိဝိရာဇ် ဘုရင်မှာ ရာဇဣနြေ္ဒမျှ မဆည်နိုင်ဘဲ တဏှာ ဥပါဒါန်ဖြင့် စွဲငြိ ရူးသွပ်သွားပုံ အပိုင်း၊ အဘိပါရက စစ်သူကြီး၏ သူကောင်း သဘောထား ရှိပုံ၊ ဇာတ်လမ်း အချိတ်အဆက် မိ၍ သဘာဝကျ မြိုင်ဆိုင် ကောင်းမွန်လှ၏။
. . . အချောအလှ မေရီမြင့်က မယ်ဥမ္မာ၏ နေရာတွင် နေသည်မှာ သင့်လှပေသည်။ အရူးအမူး သိဝိဘုရင် အဖြစ် ဖိုးပါ
ကြီးအား ရွေးချယ်ခဲ့သည်မှာလည်း လျော်ကန်လှသည်။
ရေးသူ မောင်ချစ် အချိုန် 03:05
အမျိုးအစား ဟာသ, အထွေထွေ